Bodhgaya Pilgrimage Tour (6 Days5Nights) - Myanmar Interlink Services Co.,Ltd.
Yangon–Bodhgaya–Varanasi–Lumbini–Kushinagar–Vaishali–Bodhgaya-Yangon ရန်ကုန်- ဗုဒ္ဓဂါယာ - ဗာရာဏသီ် - လုမ္ဗိနီ (နီပေါ) - ကုသိနာရုံ - ဝေသာလီ- ဗုဒ္ဓဂါယာ-ရန်ကုန်
Tour Price: All Inclusive Package Deal =US$850 per person for 10 pax group (twin/triple-sharing room at3Star Hotel) Price offer valid till 31st March 2020 Tour Type: MIS/OT/ွှTT-03/2019/GAYA (Outbound) Tour Duration:6Days5Nights
This exclusive 06 Days & 05 Nights tour packages offers you all four most important sites of Buddhism:
Day 3: Pilgrimage tour from VARANASI to LUMBINI ဗာရာဏသီ-လုမ္ဗိနီ(နီပေါ)
Day 4: Pilgrimage tour from LUMBINI to KUSHINAGAR လုမ္ဗိနီ(နီပေါ)-ကုသိနာရုံ
Day 5: Pilgrimage tour from KUSHINAGAR to VAISHALI to BODHGAYA ကုသိနာရုံ-ဝေသာလီ-ဗုဒ္ဓဂါယာ
Day 6: BODHGAYA (Morning visit to Mahabodhi Temple & Bodhi tree)
Monument Entrance Fee. (Varanasi , Sravasti, Lumbini, & Vaishali).
01 Meditation Mat per pax
Nepal Visa – USD 25 Per Person
ကြယ်သုံးပွင့်ဟိုတယ်၌ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းကိုနှစ်ဦးမျှနေထိုင်သည့်စံနစ်ဖြင့် နံနက်စာပါ ပါဝင်ပြီး ၅ ညအိပ် တည်းခိုနိုင်ခြင်း
အထက်ဖေါ်ပြပါခရီးစဉ်အရ ဗာရာဏသီ – လုမ္ဗိနီ – ဝေသာလီ-ကုသိနာရုံ အတွက် ၀င်ကြေး ပေးခြင်း
လိုအပ်ပါက စရိတ်လှူဒါန်းပါဝင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာဘုန်းကြီးကြွချီလိုက်ပါရန် ပင့်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုပေးနေသော ခရီးသွားကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မိမိတို.အစိုးမရနိုင်သော လေယာဉ်ချိန် နောက်ကျခြင်း၊ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို.ကြောင့် ပိုမိုကုန်ကျလာမည့်စရိတ်များ၊ New Year/Christmas နေ.ရက်များ အတွက် တိုးမြှင့်ကောက်ခံမည့်စရိတ်များနှင့် အခြားမည်သည့် Monument ၀င်ကြေးများ
Day 1: ARRIVE GAYA - BODHGAYA (L/D)
Sujata House:2Km west of Bodhgaya, near the Phalgu River isatemple dedicated to an Uruvela tribeswoman who offered food to the starving Siddhartha.
အိန္ဒိယနိုင်ငံဂယာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် စောင့်ကြိုနေ၍ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဟိုတယ် သို. Check-in လုပ်ရန် လိုက်ပါ ပို.ဆောင်ပေးပါမည်။ နေ့လည်စာစားပြီးနောက် ဘုရားအဖြစ်သို. ရောက်ရှိရာ မဟာဗောဓိဌာန ဗုဒ္ဓဂယာသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာပါမည်။ အာသောကမင်းကြီး တည်ထားကိုးကွယ် ခဲ့သော မဟာဗောဓိ စေတီတော်၊ တန်ခိုးကြီး ဗောဓိ ညောင်ပင် ၊ Sujata village၊ ဗုဒ္ဓ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူ ပြီးနောက် ရေချိုး သန့်စင်တော် မူရာ Niranjana မြစ်၊ ဥာဏ်တော်မြင့် ပေ ၈၀ ရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း အမျိုးမျိုး စသည့် နေရာများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကြပါမည်။ ဗုဒ္ဓဂယာမြို.ရှိ ဟိုတယ်၌ ညစာစားပြီး ညအိပ်တည်းခိုမည်။
Day 2: BODHGAYA – VARANASI (B/L/D) 250Kms/05 - 06 Hrs
After breakfast proceed to Varanasi. Upon arrival check –in into hotel.
Sarnath: The principle centre of Buddhism. It was here around 530 B.C that Buddha preached his 1st sermon after gaining enlightenment. The city is famous for its Buddhist pilgrimage and the underlying stories of Lord Buddha. The most praised attraction is the Dharmarajika Stupa and massive statue of4majestic lions. A museum here is learnt of to be the home of ancient artifacts dating back to 3rd century BC.
Mulgandha Kuti: Mulagandha Kuti Vihar isawelcome break from architectural monotony in Sarnath. Situated amidst brick ruins of ancient Sarnath, this Buddhist Temple is as distinct from any Buddhist Architectural pattern as chalk and cheese. This modern temple that looks truly magnificent with detailed designed patterns in its interiors has been erected by the Maha Bodhi society in the year 1931. The temple is famous for its Murals and Frescoes. Mulagandha Kuti Vihar boasts off some of the most magnificent and colorful Frescoes that have been made by the magical hands of Kosetsu Nosu. Kosetsu Nosu happens to be Japan’s foremost painter. These Frescoes and Murals have rich repositories of Buddhist literature. While Frescoes dominate the interiors of Mulagandha, Murals are largely confined to the exteriors. They can be presently seen on walls and pillars along with the outer columns.
Sarnath Museum: Archaeological Museum Sarnath is the oldest site museum of Archaeological Survey of India in real sense. In order to preserve and display the antiquities found from the site during the excavations,adecision was taken in 1905 by the Government to constructasite museum adjacent to the excavated area at Sarnath.
ဟိုတယ်၌နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ဗာရာဏသီမြို.သို.ထွက်ခွာပါမည်။ ထိုမှတဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ၏ အထွတ်အမြတ် ထားရာနေရာဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားရှင် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးအား ဓမ္မစင်္ကြာ တရားဦး ဟောတော်မူရာ Sarnath မြို.(မိဂဒါဝုန်ဌာန)၌ ဓမ္မာရာဇိကစေတီ၊ နှင့် ဓမ္မေခစေတီ တို.အားဖူးမျှော် ပြီးနောက် သမင်ဥယျာဉ်၊ ထုထည်အလွန်ကြီးမားသော ခြင်္သေ့ရုပ်တုကြီး (၄)ခု၊ မူလဂန္ဓကုဋိ ဓါတ်တော်တိုက်နှင့် Sarnath ပြတိုက်သို့ သွားရောက်လေ.လာပါမည်။ ဗာရာဏသီမြို.ရှိလုမ္ဗိနီ ရှိဟိုတယ်၌ ညစာစားပြီး ညအိပ်တည်းခို ပါမည်။
Day 3: VARANASI – LUMBINI (B/L/D) 390Kms/08 Hrs
Early morning Boat ride on river Ganges to see the beautiful sunrise at Ganges.
Breakfast at the Hotel. After breakfast proceed to Lumbini, En- route Lunch at local restaurant, Arrive Lumbini & check in hotel.
တတိယနေ့ ။ ဗာရာဏသီ် – လုမ္ဗိနီ (နီပေါ)
မနက်စောစောအချိန်တွင် ဂဂါင်္မြစ်ထဲသို. နေထွက်ချိန်အမှီလှေဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာ ပါမည်။
ဟိုတယ်၌နံနက်စာ စားသုံးပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် မွေးဖွားရာ နီပေါနိုင်ငံ လုမ္ဗိနီဌာနသို. ထွက်ခွာ မည်။
လမ်းခရီး၌ စားသောက်ဆိုင်တွင် နေ.လယ်စာ သုံးဆောင်မည်။
လုမ္ဗိနီရောက်လျှင် ဟိုတယ်၌ ညစာစား၍ ညအိပ်တည်းခို ပါမည်။
Day 4: LUMBINI – KUSHINAGAR (B/L/D) 200Kms/05 Hrs
Breakfast at the Hotel. After Breakfast visit Lumbini
Maya Devi Temple: This temple is supposed to be dedicated to Maya Devi, who is Buddha’s mother, which seems natural as Lumbini in famed as the birth place of Buddha. The temple was built during the 2nd century.
Ashoka Pillar: built in the year 259BC, this pillar was built by King Ashok, who was Buddhist. When he constructed this pillar, the King exempted the villagers from paying tax and gave out 100 golden coins to the people. In the seventh century, the pillar was struck by lightning and split into two parts. The site was lost for six centuries and covered with dense forest before being re found in 1895. The place was cleared and the pillar reconstructed and the sacred pond which are associated to the roots of Buddhism. Also visit to Kudan & Kapilvastu (If Time Permit).
Lunch at hotel then drive to Kushinagar, Arrive Kushinagar check inn hotel.
စထုတ္ထနေ့ ။ လုမ္ဗိနီ (နီပေါ) – ကုသိနာရုံ
ဟိုတယ်၌နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး မြတ်စွာဘုရားလောင်း ဖွားမြင်ရာ လုမ္ဗိနီအင်ကြင်းတော (သံဝေဇနိယဌာန) ရှိ တန်ခိုးကြီး ဘုရားစေတီများ၊ ဘုရားလောင်း၏ မယ်တော်မာယာ ရေချိုးသန်.စင်ရာရေကန်၊ မယ်တော်မာယာ ဘုရားကျောင်း၊ အသောက မင်းကြီး၏ကျောက်စာတိုင် စသည့် အထင်ကရ နေရာများသို. သွားရောက် ဖူးမြော်ပြီးကုသိနာရုံ မြို.သို.ထွက်ခွာပါမည်။ ကုသိနာရုံမြို.သို. ရောက်လျှင်ဟိုတယ်၌ ညစာစား၍ ညအိပ်တည်းခို ပါမည်။
Day 5: KUSHINAGAR - VAISHALI – BODHGAYA (B/L/D) 410 Kms/10 Hrs
Breakfast at the hotel. After Breakfast sightseeing of
Matha Kuar: The Matha Kuar shrine hasastatue of Buddha dating back to the 10th century. This3m high statue is said to have been built ofasingle stone. The statue at the temple depicts Lord Buddha inaBhumi Sparsh Mudra. It also shows Buddha sitting under the Bodhi Tree, which symbolically represents ‘the Enlightenment of Buddha. Then drive to Vaishali, Arrive Vaishali & lunch at local restaurant, After lunch visit Vaishali.
ပဉ္စမနေ့ ။ ကုသိနာရုံ – ဝေသာလီ- ဗုဒ္ဓဂါယာ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံရာ ကုသိနာရုံဌာနရှိရာ မဟာပရိနိဗ္ဗာန်စေတီတော် (သံဝေဇနိယဌာန)၊ တေဇောဓါတ် လောင်ကျွှမ်းတော်မူ သည့်နေရာ၊ မြတ်စွာဘုရားရှင် နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရေသောက်သုံးတော်မူခဲ့သောRambharစေတီ၊
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဓါတ်တော်များ ဝေငှသည့် နေရာများကို အထိမ်းအမှတ်ပြု တည်ဆောက် ကိုးကွယ်ထားသည့်ဘုရားစေတီများ၊ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းများနှင့် ကျောက်တစ်လုံးထဲမှ ထွင်းထား သော ဥာဏ်တော်(၃)မီတာ အမြင့်ရှိ ကေစရိယ စေတီ နေရာများသို. သွားရောက် ကြည်ညိုဖူးမြော်ပြီး ဝေသာလီမြို.သို. ခရီးဆက်မည်။ ဝေသာလီမြို.ရောက်လျှင် ဟိုတယ်၌ နေ.လယ်စာစား၍ ဗုဒ္ဓဂါယာ မြို.သို.ခရီးဆက်ပါမည်။ ဝေသာလီမြို. ရှိ ဟိုတယ်၌ နေ.လည်စာစားပါမည်။ ဝေသာလီမြို.သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ လမ်းခရီး တွင် သပိတ်တော်အား လွဲအပ်ခဲ့သည့်နေရာ၊ ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီ နောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရား ဟောတော်မူသည့် နေရာ၊ စသဖြင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အရေးပါ ထင်ရှားပြီး သရက်နှင့် ငှက်ပျောခြံများ ပတ်လည်ဝိုင်း နေသောမြို.တစ်မြို.ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဂါယာ မြို.သို.ရောက်လျှင် ဟိုတယ်၌ ညစာစား၍ ညအိပ် တည်းခို ပါမည်။
Day 6: BODHGAYA - GAYA - DEPARTURE (B/X/X)
Morning visit to Mahabodhi Temple & Bodhi tree.
ဆဌမနေ.။ ဗုဒ္ဓဂါယာ – ဂါယာ – ရန်ကုန်
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် မဟာဗောဓိစေတီနှင့် မဟာဗောဓိပင်သို. သွားရောက်ဖူးမျှော်မည်။ ထိုနောက် ဗုဒ္ဓဂါယာ၏အရှေ.မြောက်ဘက် ၁၂ ကီလိုခန်. အကွာအဝေးရှိ ဒုက္ခစရိယ လိုဏ်ဂူတော်သို. သွားရောက်လေ့လာကြမည်။ ဒုက္ခစရိယ လိုဏ်ဂူတော်တွင်း၌ ဂူကြီး ၃ ဂူရှိပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဒုက္ခစရိယကျင့်စဉ်ကို (၆)နှစ်တိုင်အောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်နေခဲ့တော်မူသည့် နေရာ များဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဂူများတွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဒုက္ခစရိယကျင့်စဉ်ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်နေခဲ့ တော်မူသည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည့် အခြားစေတီ ပုထိုးများ လည်းရှိပါသည်။ နေ.လယ်စာကို ဗုဒ္ဓဂါယာ၌ ပြန်လည်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ဂါယာလေဆိပ်သို.ဆင်း၍ ရန်ကုန်သို. ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။
COST (USD PER PERSON BASIS) inclusive of Airfare, and Visa fees
ONE 41 SEATER
01 A/C INNOVA
01 A/C CAR
(NO ROOM AT GAYA, LUM, DELHI & AGRA)
Above rates are valid till MARCH’ 2020.
BODHGAYA HOTEL SUJATA/HOTEL BODHGAYA REGENCY BODHAGAYA GAUTUM/HOTEL TATHAGAT INT’L
VARANASI HOTEL SURYA KESAR PALACE
/HOTEL COSTA RIVERIA HOTEL SGT PLAZA
KUSHINAGAR HOTEL OM RESIDENCY HOTEL MAITTREY RESIDENCY